Flora Breziliana atahorana ho lany tamingana | Fitsangatsanganana tanteraka
Flora Breziliana atahorana ho lany tamingana
Daniel | 15/04/2021 12:23 | Nohavaozina amin'ny 15/04/2021 13:23 | Brasil
Brasil Izy io no firenena maintso indrindra any Amerika atsimo, tany misy habaka voajanahary goavambe sy zava-boary mahavelona tsy mampino. Saingy tandindomin-doza tokoa io harena midadasika io, indrindra ny flora brazilian.
Ny fanadihadiana natao taona vitsivitsy tany amin'ny firenena amerikana tatsimo dia nanombana ny isan'ireo karazan-javamaniry tandindomin-doza dia 2.118. Tsy izany ihany fa: ihany koa, hoy ny biolojista biolojika malaza Gustavo Martinelli, mpandrindra ny Boky Mena an'ny Flora any Brezila (2013), ny tahan'ny lany tamingana ny karazany dia haingana kokoa noho ny noheverina taona vitsy lasa izay.
Martinelli dia nanao asa titanika amin'ny fanaovana katalaogy sy fanasokajiana ny haren'ny zavamaniry any Brezila. Ny ezak'izy ireo koa dia mitarika amin'ny fampahafantarana ny fiaraha-monina sy ny manampahefana ny maha-zava-dehibe ny resaka momba io harena io.
Betsaka ny karazana flora Breziliana no tafiditra ao amin'ny Lisitra mena an'ny Vondrona Iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny natiora (IUCN). Na izany aza, raha jerena ny fikarohana vaovao, ny lisitra tena izy dia be lavitra kokoa.
Tombanan'ireo manam-pahaizana fa any amin'ny ala any Brezila mbola miafina izy ireo karazany maro tsy hita. Ireo karazana ireo dia mety ho eo anelanelan'ny 10% sy 20% amin'ny tena flora Breziliana. Mahaliana fa ny tahan'ny famantarana karazan-karazany vaovao dia miadana kokoa noho ny tahan'ny fanjavonan'ireo karazam-biby fantatra.
ny antony nahatonga an'io fandroahana faobe io dia fantatra tsara. Azo fintina amin'ny telo izy ireo:
Aza manavakavaka ny fitrandrahana ala ho an'ny fambolena.
Ny ala dia mifandraika amin'ny fanolorana tanàna ny habaka vaovao.
1 Karazan-javamaniry voahambana ao Brazil
2 Vonjeo ny flora Breziliana
Karazan-javamaniry voahambana ao Brazil
Ny karazan-javamaniry flora Breziliana dia voasokajy ho vondrona efatra araka ny haavon'ny fandrahonana. Ity fanasokajiana ity dia namboarina tamin'ny mari-pahaizana momba ny tahan'ny fihenan'ny isan'ny mponina, ny haben'ny isan'ny mponina, ny velaran'ny fizarana ara-jeografika ary ny habetsahan'ny sisan'ny mponina.
Ity dia lisitr'ireo karazana tandindonin-doza indrindra atahorana ho lany tamingana:
Fantatra amin'ny anarana hafa toa campinchorâo, nakatona i aveia o samambaia indiana. Izy io dia zavamaniry manana endrika toa volotsangana izay nitombo tamin'ny fomba nentim-paharazana tany amin'ny faritra amorontsirak'i Brezila. Tandindomin-doza izy izao.
Brasilian (Syngonanthus brasiliana)
Ny iray amin'ireo karazana tandindomin-doza any Brezila dia ilay manome an'ity firenena ity ny anarany. Ny hazo dia nampiasain'ny mpifindra monina Portiogey ho an'ny fanamboarana loko sy fanamboarana zava-maneno sasany.
Sampana Jacaranda avy any Baia
Hazo endemika an'ny zavamaniry Breziliana izay sarobidy indrindra amin'ny hazo. Ny fitrandrahana an-tsokosoko dia nampihena ny isan'ny isan'ny santionany.
Zavamaniry malemy mamokatra voaroy misy fananana mahasoa maro. Ity zavamaniry ity, izay an'ny fianakaviana iray ihany sy ny hazo mulbera, dia ahiana hanjavona any Brezila.
Ny paininha miaraka amin'ny voninkazo mena sy mavo mamirapiratra. Karazana tandindomin-doza
Zavamaniry misy voninkazo mena sy mavo tsara tarehy izay nihena be ny fisian'ireo faritra amorontsiraka tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Subspecies an'ny rofia dwarf miaraka amin'ny vatan-kazo manify izay maniry amin'ny faritra sasany any atsimon'ny firenena. Ny ala palmista taloha dia voafetra ankehitriny amin'ny fisian'ny fijoroana vavolombelona.
Pinheriro do Paraná na Araucária: ilay kesika "Breziliana" atahorana hanjavona.
Karazan-kazo amin'ny fianakavian'ireo Auraucariaceae voatanisa ho flora marefo. Ity kesika Breziliana ity, antsoina koa curi, mety hahatratra 35 metatra ny haavony. Tany am-boalohany dia nitatra tamin'ny endrika be ala be any atsimon'ny firenena. Nahagaga ny fihemorana tao anatin'ny folo taona lasa.
Ny hazo avy any amin'ny faritra Amazon izay ny tsiranoka mena, mitovy amin'ny ra, dia ampiasaina hamokarana vokatra ara-pahasalamana sy hatsarana maro.
Ilay zavamaniry "kofehy mainty" malaza, izay be dia be ankehitriny, dia nanjavona tsy hita intsony tao amin'ny firenena.
Zavamaniry volo sy tandindomin-doza
Zavamaniry misy voninkazo mavokely izay mampiavaka azy manokana ny tahony sy ny raviny "volo". Zato taona lasa izay no nizarana nanerana ny firenena manontolo, ankehitriny dia mbola velona ihany any amin'ny faritra arovana sasany.
Vonjeo ny flora Breziliana
Rariny raha milaza fa misy hetsika fandraisana andraikitra lehibe natao hitandrovana ny zavamaniry Breziliana. Brezila dia sonia ny Fifanarahana momba ny fahasamihafana biolojika sy ny kendrena Aichi (2011), fanoloran-tena iraisam-pirenena be fatratra hisorohana ny fahaverezan'ny karazan-doza.
Anisan'ny fepetra maro hafa, namoaka taona vitsivitsy lasa izay ny governemanta federaly a sari-tany momba ny laharam-pahamehana, maro amin'izy ireo no efa nahazo a fiarovana manokana. Ary tsy hamonjy ny flora ihany, fa ny biby ao amin'ny firenena ihany koa.
Amin'ireo tetik'asa fiarovana rehetra ireo, ny teknolojia mitana andraikitra lehibe. Misaotra an'io fa azo atao ny mitahiry ny voan'ny zava-maniry tandindonin-doza mba hampiasaina amin'ny toeram-ponenana sitrana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Flora Breziliana atahorana ho lany tamingana
anonimo dia hoy izy:
Tiako i lino
Valiny amin'ny tsy fantatra anarana
Toa ahy izany fa tsy manome ny fampahalalana
NAHOANA IREO IRAY IREO NO M
SHIT SY LAPUTA
Valiny amin'i CARLOS
Kiobà sy ny niandohan'ny anarany
Mofomamy sy legioma holandey
Midira amin'ny Absolut Viajes maimaimpoana ary raiso ny vaovao farany momba ny dia sy fizahan-tany amin'ny mailakao.